Khabar Break - अब कहाँ “ट्युसन” लिन जाउँ ?
अब कहाँ “ट्युसन” लिन जाउँ ?
आउँदो मंसीर २१ गते हुने दोश्रो चरणको प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेसभा निर्वाचनको सन्र्दभमा टिकट तथा क्षेत्र विभाजनको अन्तिम तयारी भैरहेको छ । मकवानपुरमा यो रहेको प्रतिनिधि एवम् प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि रहेको ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा को को उम्मेद्वार बन्ने भन्ने विषयले यतिवेला चर्चा पएको छ । वाम गठबन्धको कारण एमालेले मकवानपुरमा दुइवटा प्रतिनिधि एवम् दुईवटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पाउने टुंगो भईसकेको अवस्थामा मकवानपुरे राजनीतिमा विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ ।
यसै सन्र्दमा मकवानपुरका एमाले नेता तथा प्रदेश नंबर ३ सदस्य रामचन्द्र राईले आज आफ्नो फेसबुक मा लेखेको स्टाटसको मकवानपुरे राजनीतिमा चर्चा एउटा बहसको सृजना गरेको छ । उनले लेखेका छन् २०३५÷०३६ सालबाट निरन्तर राजनीतिमा लागियो यस क्षेत्रमा मैले नजानेको र नबुझेको धेरै रहेछ, अब कहाँ ट्युसन दिन जाउँ ?
उनको स्टाटसले एमाले मकवानपुरलाई समेत गम्भिर प्रहार गरेको देखिन्छ । आउँदो निर्वाचनमा मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नंबर १ अन्र्तगत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस भएका राईलाई यो पटक पनि वाम तालमेलले गर्दा आफ्नो क्षेत्र छोडनुपर्ने संभावना बढेको छ । एमाले मकवानपुरले दुईवटा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र पाउने भइपछि एमालेले छोडनुपर्ने क्षेत्रमा राई सिफारिस भएको क्षेत्र र मनहरी क्षेत्र पर्ने प्रदेसभा क्षेत्र(ख) पर्ने संभावना बढेको छ ।
एमाले मकवानपुरका पहिलो श्रेणीको नेताहरुको समूहमा रहेका राईले अहिलेसम्म एमालेको तर्फबाट पाउने संसदीय तथा कुनै लाभको पदहरु पाएका छैनन् । लोकतान्त्रीक दनुवार संघका अध्यक्ष समेत रहेका राई पदलाई खासै वास्ता नगर्ने नेताको रुपमा समेत लिने गरिएको छ । एमाले मकवानपुरको खरो नेताको रुपमा रहेका राई अनवरतरुपमा पार्टीको हरेक जिम्मेवमरीको वहन गर्दा समेत उनलाई पार्टीले अवसर दिने समयमा पाखा लगाउने गरेको उनी निकट नेताहरुको भनाई रहेको छ । उनको स्टाटसको तात्पर्य पनि पार्टीले उनको योगदानको कदर गर्दै उनलाई सिफासिरस गरिएको निर्वाचन क्षेत्र आफैले राख्नुपर्ने हुनसक्ने नेताहरुको भनाई रहेको छ । पटक पटक सिफारिसमा परेपनि टिकट पाउनबाट बञ्चित भएका राईले यो पटक भने सामजिक सञ्जालबाटै भएपनि आफ्नो अशन्तुष्टि ब्यक्त गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।